3 ก.ค. 2561 - 22:49 น.
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ General Tinio မြို့တော်ဝန် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ် ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ နှစ်ရက် အတွင်းမှာ မြို့တော်ဝန် နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က မြို့တော်ဝန် ဖာဒီနန် ဘိုတေ Ferdinand Bote ဟာ သူ့ကားမောင်း သမားနဲ့ အတူ နုဝေးဗာ အေသီခါ Nueva Ecija ပြည်နယ် အစိုးရ ရုံးကနေ အပြန်မှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာတဲ့ သေနတ်သမားတွေရဲ့ နဲ့ ပစ်ခတ် လုပ်ကြံ ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က မြို့တော်ဝန် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အသက် ၅၇ နှစ် အရွယ် ဖာဒီနန် ဘိုတေ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကားမောင်းသမားကတော့ အသက်ဘေးက ကင်းလွတ်ခဲ့ ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ ကလည်း မနီလာ တောင်ပိုင်း မြို့တစ်မြို့က အငြင်းပွား စရာ ဖြစ်စေတဲ့ အသက် ၇၂ နှစ် အရွယ် မြို့တော်ဝန် အန်တိုနီယို ဟာလီလီ Antonio Halili ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန် အန်တိုနီယို ဟာလီလီဟာ မနီလာမြို့တော် တောင်ပိုင်း တာနားဝန် မြို့က မြို့တော် ခန်းမ ရှေ့မှာပဲ လက်ဖြောင့် သေနတ်သမား တစ်ယောက်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည် တစ်တောင့် ထဲနဲ့ သေဆုံးခဲ့တာပါ။
ဘယ်သူ ပစ်ခတ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
၂၀၁၆ ခုနှစ်က မူးယစ် ဆေးဝါးမှုနဲ့ သံသယ ရှိသူတွေကို သူတို့ ကျူးလွန် ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကိုင်ခိုင်းပြီး လမ်းမတွေပေါ်မှာ လျှောက်ခိုင်း ခဲ့ပြီးနောက်မှာ မစ္စတာ ဟာလီလီ ထင်ရှား ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
လူ့အခွင့် အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ အုပ်စုတွေက တော့ အဲဒီ ကိစ္စကို ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရကလည်း ဒါဟာ မစ္စတာ ဟာလီလီ အနေနဲ့ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်မှုမှာ သူ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ ရဲတွေ ယုံအောင် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး သူဟာ မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ ပတ်သက် ကောင်း ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ သမ္မတ ဒူတာတေးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ ဒီစွပ်စွဲမှုကို ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ၂ ရက်အတွင်း မြို့တော်ဝန် ၂ ဦး သတ်ခံရ